Kolontsaina… fanajana sy fampiharana lalàna. | NewsMada
Kolontsaina… fanajana sy fampiharana lalàna.
Par Taratra sur 12/01/2021
Lasa resaka politika indray tato ho ato ny amin’ny hoe fifandimbiasam-pahefana mazava, milamina… Tsy inona fa izay lazaina ho ara-pomba demokratika amin’ny alalan’ny fifidianana. Misy ny tsy mahandry tantana? Na sanatria fitiavana te hamendrofendro, hanakorontana, hamaly faty…
Tokony handeha ho azy anefa izay hoe fanajana sy fanarahana lalàna izay. Manapitra ny fe-potoam-piasana ny mpitondra am-perinasa; avy eo, malalaka amin’ny firosoana amin’ny fifidianana ny rehetra. Saingy odian’ny sasany tsy fantatra na iniana roritina izany ka lasa resaka sy adihevitra politika.
Tsy mety ho kolontsaina ny fanajana sy fampiharana lalàna? Rehefa tena ampiharina tokoa ny lalàna: tebahin’ny sasany ho jadona, fanararaotam-pahefana, fanaovana valifaty… Mandra-pahoviana? Ambonin’ny lalàna ve ny mpisehatra politika na ny fanaovana politika? Na tsy tokony hampiharana lalàna…
Ny fahitana sy fiainana izany no mahatonga ny tsy fanarahan-dalàna mahazo vahana? Na mahasarotra ny fampiharan-dalàna… Tsy misy ohatra avy any ambony amin’ireo hoe olobe azo alain-tahaka amin’ny fanajana sy fampiaharan-dalàna? Hany ka zary saika mandeha ho azy etsy sy eroa ny gaboraraka.
Iaraha-mahita sy iainana isan’andro ny tsy fanajana sy fampiharana lalàna? Saika eo amin’ny sehatra sy ambaratonga maro: fifamoivoizana, varotra… Izay mba hoe fanajana lalàna, mbola fanahiana sy tahotra fitsarana, fanagadrana, fanasaziana… Tsy mety ho kolontsaina mandrafitra ny maha izy azy ny tsirairay?
Raha misy tsy fanaraha-maso, ohatra, ny sasany noho ny fahazaran-dratsy, lasa fahamboniana sy fiavahana mitaha amin’ny maro ny tsy fanarahan-dalàna. Nefa faran’izay mahamenatra sy maharikoriko ny tsy tan-dalàna, fa miara-miaina amin’ny hafa ny tena. Izay no anisan’ny mahasarotra ny fampandrosoana?
Rahoviana sy amin’ny fomba ahoana vao ho kolontsaina fanajana sy fampiharan-dalàna? Hanajana tena, hifanajana… Tsy ny fomba amam-panao na ny fahazarana no iainana ho lalàna, fa ny lalàna no iainana ho fomba amam-panao sy fahazarana.